Tiro badan oo loo dheereeyey ruqsadda deganaanshaha - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Faro laga qadayo magangeliyo doon. sawir: Marcus Ericsson/TT
Tiro badan oo loo dheereeyey ruqsadda deganaanshaha
La daabacay måndag 28 augusti 2017 kl 13.44
Tiro gaaraysa 5 100 qof ayaa gudubsaday dalabyo ah in loo dheereeyo rugsada deganaasho ee ay ku joogaan Sweden.
Ku dhawaad 370 kiisaskaad ka mid ah ayaa hey’adda socdalka illaa iyo hadda go’aan ka gaartay, iyada oo intooda badan, tobankii sideed loo dheereeyey deganaashaha Sweden, sida uu wariyey wargeyska Svenska Dagbladet.
Badankooda dadkan ayaa ah dad lagu qiimeeyey dalabyadooda baahiyo kale oo aan aheyn magangeliyo gelin, kuwaas intooda badan ka soo jeeda waddamada Syria iyo Eritrea.
Sharciga magangeliyada ku-meel-gaar ah ayaa baarlamaanka dalka hirgeliyey xagaagii hore, waxa uuna sii jiri doonaa illaa iyo bisha julay sannadka 2019. Iyada oo deganaashaha ku-meel-gaarka ah ee la baxiyo sii jiri doonaan illaa inta sharcigas jiro.
Ku dhawaad 30 000 oo magangeliyo doon ah ayaa la siiyeey deganaansho ku-mmel-gaar ah sida uu dhigayo sharciga magangeliyada ku-meel-gaarka ah, sida wargeysku wariyey. Kuwii ugu horeeyey deganaanshaha ku-meel-gaarka ah ee ay hey’adda socdaalka baxisay waxay dhaceen 20kii bishaan august.